परमेश्वरले तपाईंलाई को मन छ | Thentrance
​परमेश्वरको आँखा आफ्ना जनहरूमाथि कहिल्यै छन्, हामी बुझ्न उहाँको वचन द्वारा भनेर
1 पत्रुस 3:12 प्रभुको आँखाको लागि धर्मी पदभार हुन्छन्, र उहाँका कान तिनीहरूका प्रार्थना निम्ति खुला छन् तर प्रभुको अनुहार दुष्ट के भनी विरुद्ध छ।
परमेश्वरको उहाँले jealously आफ्ना मानिसहरूलाई ध्यान केन्द्रित, हामीलाई आफ्ना आँखा हटाउन छैन। हामी पनि हामी उहाँको हातमा कुँदिएका छन् भन्ने बुझ्न
यशैया 49:16 हेर्नुहोस, म मेरो हात को Palms मा आफ्नो नाम लेखिएको छ। सधैं मेरो मनमा भग्नावशेष मा यरूशलेमको पर्खाल को एक तस्वीर छ। (नयाँ जीवन अनुवाद)
उहाँले तपाईंलाई मेरो हात को Palms लेखिएको हुनुहुन्छ र सधैं म मेरो मनमा तपाईं के भन्नुहुन्छ। यो तिम्रो हो! तपाईं परमेश्वरको मनमा सधैं हुनुहुन्छ। भन्ने पनि परमेश्वरले आफ्ना मान्छे हामी mindful छ यो स्पष्ट छ कि बनाउँछ फेरि अर्को पद हेरौं।
भजनमा 115: 12 यहोवा सधैं हाम्रो बारेमा सोच छ, र उहाँ हामीलाई पक्कै पनि दिनुहुनेछ। उहाँले इस्राएलका मानिसहरू र हारूनको पूजाहारीहरूले दिनुहुनेछ,
उहाँलाई श्रद्धाको गर्ने 13 र सबै, दुवै ठूलो र सानो,। (बाँच्ने बाइबल)
फेरि हामी परमेश्वरले हामीलाई को साँच्चै mindful छ भनेर, र उहाँले हामीलाई को बस mindful छैन र उनको हात को Palms हामीलाई भएको तर उहाँ भन्नुहुन्छ “उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ …”
“उहाँलाई हामी mindful हुनुको “परमेश्वरको आशिष् बाँकी”
परमेश्वरले तपाईंलाई को mindful छ! तपाईं त्यो अवस्था परमेश्वरको उहाँले तपाईंलाई को mindful छ किनभने तपाईं आशीर्वाद लागि हुनेछ, भनेर विश्वास गर्न आवश्यक छ। तपाईं बिर्सेका छैनन् हुनुहुन्छ!
हामी दाऊद सबै उहाँले हेर्नुभयो र भन्नुभयो प्रभु गरेको छलफल र त्यसपछि जहाँ अर्को ठाउँमा स्पष्ट देख्न “तपाईं उहाँलाई mindful हुनुहुन्छ भनेर मानिस के हो?”
भजनमा 8:4के तिमी उहाँलाई mindful हौ कि, मान्छे हो? र मानिसको छोरा, तिमी उसलाई visitest कि?
त्यसपछि यो कुरा हो कि यो पद छैन भन्नुभयो “कसले तर मानिसको के हो …” यो परमेश्वरले हामीलाई मन मा छ लागि अर्थ नोट! त्यसैले हामी परमेश्वरको उहाँको वचन हामीलाई को mindful छ भनेर बुझ्न। परमेश्वरको महिमा! कहिल्यै उदास हो, कहिल्यै त्याग्ने महसुस वा परमेश्वरले तपाईंको प्रार्थना जवाफ पनि दिइएको छैन भनेर, सधैं परमेश्वरको निरन्तर तपाईं सोचिरहेका छ भनेर मनमा छ! कसरी उहाँलाई तपाईं फलिफाप कसरी तपाईंले उहाँलाई जस्तै हुन बनाउन, आफ्नो रोग र रोग कसरी निको पार्न, तपाईं कसरी आउन, तपाईं कसरी गर्न उहाँको वचन खोल्न, तपाईं कसरी थप, तपाईं कसरी दिन उहाँलाई बुझ्न बनाउन उहाँको तपाईं लागि चाहनुहुन्छ! परमेश्वरको निरन्तर तपाईं को सोच छ किनभने तपाईं आशिष् हुनुहुन्छ। त्यो कसरी सोच्न छ।
येशूले आफ्नो जीवन दिन, तिमी सिर्फ दुई कुराहरू के गर्न आवश्यक,
आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार
रोमी 10:9यदि यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ त्यो …
कि मृत आफ्नो मुखले स्वीकार परमेश्वरले येशूलाई खडा भएकोछ कि आफ्नो हृदयमा विश्वास
रोमी 10:9… र हुँदैन तपाईंकै हृदयमा विश्वास परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताउनुभयो भएकोछ कि, तिमी मुक्ति।
त्यो किनभने कसरी बाँच्नु छ
10:10 हृदय मानिस संग लागि धार्मिकता निम्ति विश्वास; र मुख स्वीकार संग मुक्तिको निम्ति बनेको छ।
अब तपाईं फेरि जन्म हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईंलाई को mindful छ भन्ने बुझ्न पर्छ। परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष!
PreviousGOD IS MINDFUL OF YOU.
Nextयेशूले कसरी प्राप्त गर्न